Maxaa looga guuleysan la’yahay Al-shabaab 12 sano kadib? | Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 6 October 2019
Mareeg.com-12 sano kadib wali Lama yareysan karo qatarta ka imaneysa al-shabaab, weerarka balidoogle waxay natusiineysaa in qatarta arkakixisada ayka weyntahay sida lasaadaalinaayo. Al-shabaab waxay kudhiiradeen Balidoogle oo ah Meesha ugu adag amni ahaan ayada oo ay ku idilyihiin qalab casri ah iyo ciidanka somaliya ugu adag. Waxay mujiyeen inay meeshay doonaan weerari karaan, awood iyo kartina uleeyihiin.
Al-shabaab mar walba waxay badalaan qaabka ay uhool galaan, meelaha ay beegsadaan, waqtiga iyo sida ay wax uweeraraanba. Laga soo bilaaba markii xamar laga saaray waxay bilaabeen dagaal qorsheysan ama xeeladeysan, qaarkoodna kudhaxmilmeen ama lahoolgaleen dowlada, Dowlada ama kuwa dajiya qorshaha ladagaanka ururkaas waxay umuuqdan kuwa kuguuldareystay inay wax kaqabtaan farsamadaha ay adeegsadaan shabaabka ayada oo ilaa laba iyo sano (12) kadib uu ururkaas wali xooganyahay, dhul balaarana wali kataliya, dad badan dila ama laga cabsada.
Maxa looga guuleysan yahay shabaab?
Shabaab waxay canshuur kaqaadan meelaha ay kataliyaan dhamaan dadka, ganacsatada iyo kuwa dowlada ushaqeeyaba , waxa soogala daqli aad ufara badan oo ay u adeegsataan inay kufuliyaan howlahooda ladagaalanka dowlada iyo shacabkaba. Dhaqaalaha usoo xarooda waxay galiyaan dhamaantood marka laga reeba mishaarka ay siiyaan dagaalyahadooda fulinta dagaalka kadhanka ah kuwa ayaga kafikirka duwan dhaman. Lakiin dowlada dhaqaalaha soo gala sida canshuurta iyo deeqaha caalamkaba waxay badi kubaxaan qaabad dadban markii laga reeba wax yar oo mushar ah oo ay bixiyaan. Ayada oo dhaqaalaha qaarkood meela qaldan loo adeegsada sida in dhisma an baahi looqabin lagu bixiya ama lamusuqmaasuqa.
Majiro qorsho looga hortago – al-shabaab waxay qaraxya badan kageysteen meela badan oo Somaliya ah, wax cashar ah lagama baran (wallow oo sanbaloolshe kusheegay maqaalkiisa newyork times in baaritaanka lagusoo celinin ayna haysanin qalab casri ah). waxa laga yaabaa kuwa amniga qorshahiisa inay dajiyaan laga sugaayo hadii ad aqrisid cv-yadooda inaysan waligoodba aqrinin qorshooyinka kahortaga, diyaarinta iyo ladagaalanka ururada noocan ah ah (Guerilla warefare, insurgency) hadii uu jira lahaa waxa la arki lahaa natiijada. Inta aniga an lakulmay tobankii sano ee lasoo dhaafay ilaa hada wali mar arkin qof udiyaarsan ama fahansan digaalka waxa uu yahay iyo fahanka guud ee waxa kadambeeya inay sii daba dheeraadaan ururuda ama dagaalada noocan oo kala ah ee wajiyaha badan leh (terrorism, proxy wars; tusaale hizboullah, soo bixitaanka isis, iyo heshiiska FARC iyo Columbia) . dagaalka yemen (ma yamaniinta dhaxdooda aya isdagaashan mise Iran, Sacudiga iyo UAE aya iskuhaya).
Kala dano iyo fikir duwanaansho – Al-shabaab waa hal urur, hal talis iyo fikir leh laakin kuwa kasoo horjeedo oo ay ladagaalayaan waxay kala aaminsanyiin ama ay leeyihiin dano fara badan oo kala duwan sida – dowlada Somaliya waxay leedahay mucaarad, dowlad iyo maamul goboleedya kukala fikir duwan hal ciidan in ladhisa ama isku qilaafa marwalba dano qaas ah. AMISOM oo 21 kun oo askari ah, dhufeesyadooda kujira, mushaar fiicana qaata (walow ay shaqa qabteen), wadamada dariska ah oo midwalba dandiisa wata, carab oo dagaalkooda Somaliya usoo raray oo ku practice gareeya, beesha caalamka oo ayagana wadan walba uu dantiisa fiirsada. Waxay sababtay in ururka oo soo wajaha dad kala daadsan oo kala dano iyo fikirba ah.
Xalka muxuu yahay?
Cadaalada oo laxoojiya, dhalinyarada oo shaqa abuur loo sameeyo, musuqmaasuqa oo layareeya, fikirka xagjirka oo lala tirtira, cilmi baaris dheerad ah oo lasameeya, qalab casri ah oo lasoo gado, siyaasad furfuran oo lala yimaado, khilaafka oo lamaareeya, xuriyatul qowlka oo laxoojiya, bulshada oo laga qeeb galiya talada amaankooda, noolashooda iyo dowlada oo kalsooni karaadisa shacabka, ganacsatada, dowlada iyo shacabka oo wada shaqeeya isku melena uugu soo horjeesta ururada, shabakadaha iyo mafia-da oo dhan.
Waxa nasiib daro ah maamul walba oo yimaado inuu waqtigiisa dhamaado asaga oo amni dara wali jirta, ururkan 12 sano jirsaday walina qatarta badan leh waxan filayaa inuusan noqon mid sii daba dheeraada sida ururada Xisbullah (Libanon) iyo FARC (Colombia).
Waxan filayaa in dhiiragalin iyo hurda katoosan u noqotaa in qatarta shabaabka wali tahay mid daran oona aad uxoogan. Waxan filayaa in dowlada, shacabkaba iyo taageerayaasha beesha caalamkaba la yimaadaan qorsho kan kaduwan oo lagu wajaho ururkaan.